XX-SD-002, igwe kwụ otu ebe ugwu 26 inch, Wheel Aluminom
Ihe nlereanya a XX-SD-002 nwere ọtụtụ ihe iji gboo mkpa ịnya ụgbọ ala gị niile. Site n'enyemaka nke ndụdụ nkwusioru dị ike dị n'ihu iji mee ka ọ dị elu, usoro 3 * 7 na-agba ọsọ ọsọ, breeki diski na ọkụ ma siri ike alloy rims, igwe kwụ otu ebe a ga-enye gị njem dị mma ma dị larịị. Ị ga-enwe ọmarịcha ịnya ụgbọ ala gị.
XX-SD-001, igwe kwụ otu ebe ugwu 26 inch / igwe kwụ otu ebe
Site n'ụdị ụdị ugwu, ndụdụ nkwusioru n'ihu, ọsọ 21 na oche egwuregwu, igwe kwụ otu ebe 26" ka emere ka ọ bụrụ nke ọ bụla maka ịnya ala dị iche iche. Ndozi oche na-agbanwe ngwa ngwa na-enye ya ohere ịmegharị ngwa ngwa na ọnọdụ ịnya igwe yana ịdị elu onye na-agba ya.
XX-SD-003/26 inch igwe kwụ otu ebe / Okenye igwe kwụ otu ebe 26”
Model XX-SD-003 na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ọsọ 21 iji dabara na ịnya ụgbọ ala ọ bụla. Igwe nchara carbon dị elu na ndụdụ nkwusioru n'ihu na-eme ka ọ sie ike ma na-adịgide adịgide. 2.125mm taya na aluminum alloy rims na-enye njem dị mma n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
XX-SD-006, 26 inch igwe kwụ otu ebe / igwe kwụ otu ebe ugwu 26 "/ okenye MTB 26"
Model XX-SD-006 na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ọsọ 21 iji dabara na ịnya ụgbọ ala ọ bụla. Igwe nchara carbon dị elu na ndụdụ nkwusioru n'ihu na-eme ka ọ sie ike ma na-adịgide adịgide. 2.125mm taya na aluminum alloy rims na-enye njem dị mma n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
XX-SD-005, igwe kwụ otu ebe ugwu 26 inch / Brake diski, ọsọ 21
Model XX-SD-005 na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ọsọ 21 iji dabara na ịnya ọ bụla. Igwe nchara carbon dị elu na ndụdụ nkwusioru n'ihu na-eme ka ọ sie ike ma na-adịgide adịgide. 2.125mm taya na aluminum alloy rims na-enye njem dị mma n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
XX-SD-004, 26 inch ugwu igwe kwụ otu ebe / okenye igwe kwụ otu ebe
Model XX-SD-004 na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ọsọ 21 iji dabara na ịnya ọ bụla. Igwe nchara carbon dị elu na ndụdụ nkwusioru n'ihu na-eme ka ọ sie ike ma na-adịgide adịgide. 2.125mm taya na aluminum alloy rims na-enye njem dị mma n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
XX-SD-011, Ụmụaka MTB, Onye nrụpụta China OEM, ODM
Ụdị ụdị ugwu, ndụdụ nkwusioru n'ihu, na ọsọ ọsọ 21 na-eme ka nke a bụrụ igwe kwụ otu ebe maka ịnya ụgbọ ala dị iche iche. Mezue ya na nzigharị oche na-agbanwe ngwa ngwa, iji mee mgbanwe ngwa ngwa na ọnọdụ ịnya igwe yana ịdị elu onye na-agba ya. Gaa n'ụzọ ahụ ma soro ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ nwee ntụrụndụ.
XX-SD-012, China Factroy ugwu igwe kwụ otu ebe
XX-SD-009, 26 inch igwe kwụ otu ebe ugwu / MTB / igwe kwụ otu ebe ugwu nwata 26”
ihe ndụdụ: Aluminom alloy
Ihe eji eme ihe: Aluminom alloy
Ngwa ngwa: 21 ọsọ
Nkwụsị ndụ ndụdụ: Ee
Oke arọ: 18kg
Net arọ: 16kg
Ogo wheel:26 ″
Sistemụ breeki: Brake diski
Ụdị Frame: Frame proof zuru ezu
Ụdị Pedal: Pedal nkịtị
Ogologo (m): 1.2
Ibu Ibu: 120kg
Oge: N'okporo ụzọ
Enwere ike ijikọ: Mba
Ụkwụ Ọzụzụ: Mba
Ngwa: okporo ụzọ
XX-SD-010, 22,22,24 inch igwe kwụ otu ebe / igwe kwụ otu ebe ugwu / igwe kwụ otu ebe.
XX-SD-008, 26 inch igwe kwụ otu ebe ugwu / MTB / 26"
3 * 7 na-akpalite shifter na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ọsọ 21 iji dabara na ịnya ọ bụla. breeki diski arụrụ arụ na-enye ike nkwụsị dị elu. Alloy elu profaịlụ okpukpu abụọ rim mgbidi siri ike ma dị fechaa. Nwee obi ụtọ nke ịnya ugwu ugwu XX-SD-008.
XX-SD-007, 26 inch ugwu igwe kwụ otu ebe / ugwu igwe / okenye MTB
Nọmba nlereanya: SS
Ngwa ngwa: 24 ọsọ